रुसले भन्योः युक्रेनले चाहेमा आज नै युद्ध अन्त्य हुनसक्छ
एजेन्सी । केही महिनादेखि जारी युक्रेन युद्धको बीचमा रुसले ठूलो कदम चाल्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनकी श्रीमती र छोरीलाई देश प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
फिनल्याण्ड र स्वीडेनलाई नेटोमा सामेल हुने बाटो खुल्यो, टर्की सहमत !
एजेन्सी । स्वीडेन र फिनल्याण्डलाई नेटोमा सामेल हुने विषयमा विरोध गर्दै आएको टर्कीले अब सहमति जनाएको छ ।
कैदीहरूबीचको झगडाले उग्ररूप लिँदा ५१ जनाको मृत्यु
एजेन्सी । पश्चिमी कोलम्बियाको टोलुआस्थित कारागारमा मङ्गलबार कैदीहरूबीचको झगडाले उग्ररूप लिँदा ५१ जनाको मृत्यु भएको छभने २४ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन् ।
रुसले १०० वर्षमा पहिलो पटक ब्याज पनि तिर्न सकेन !
एजेन्सी । युक्रेनमा भएको आक्रमणपछि रुसमाथि लगाइएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको प्रभाव देखिन थालेको छ । एक सय वर्षमा पहिलो पटक रसियाले आफ्नो विदेशी ऋण समयमै तिर्न नसकेको मिडिया रिपोर्टका उल्लेख छ।
एजेन्सी । पाकिस्तानको पूर्वी पञ्जाब प्रान्तको रावलपिन्डी शहरको एउटा इनारमा विषालु ग्यास निस्कँदा मङ्गलबार कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ।
एजेन्सी । इरान र अमेरिकाबीचको आणविक वार्ता केही दिनमा कतारमा हुने भएको छ । सरकारी स्वामित्वको तेहरान टाइम्सले दुई देशबीचको अप्रत्यक्ष वार्ता कतारमा हुने जनाएको हो ।
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उनकी पत्नी र छोरीलाई रूस भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । मस्कोले अन्य २३ अमेरिकीलाई पनि यात्रामा प्रतिबन्ध लगाइएको रुसी विदेश मन्त्रालयले मंगलबार जनाइएको छ ।
दिल्लीमा कोरोना संक्रमण बढ्यो
एजेन्सी । सोमबार मध्यराति अर्थात २४ घण्टाको समयावधीमा भारतको दिल्ली शहरमा कोरोना भाइरसबाट थप ९७० सङ्क्रमित भएका दिल्ली सरकारले प्रकाशन गरेको स्वास्थ्य बुलेटिनमा जानकारी दिएको छ ।
एजेन्सी । टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्डोगानले आज या भोलीसम्म अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई भेट्ने बताएका छन् । युक्रेनमा रुसको आक्रमणमा केन्द्रित वार्ताका लागि म्याड्रिडमा नेटो शिखर सम्मेलन हुन गइरेहको यस अवस्थामा वार्ता गर्ने उनले बताएका छन् ।
एजेन्सी । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आर्थिकरूपमा सम्पन्न देशहरूको समूह (जी सेभेन) को बैठकमा युक्रेन द्वन्द्व वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट खाज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।